Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Hery sy Ravalo ary Andry no tompon’i Madagasikara
Pôlitika: Hery sy Ravalo ary Andry no tompon’i Madagasikara
Nahitana ny fomba fijery sy ny foto-pisainan’ny depiote eto Madagasikara iny fivoriana tsy ara-potoana izay nifarana omaly faha 21 martsa 2018 iny. Raha dinihina sy fakafakaina tsara iny raharaha fandaniana tolo-dalàna momba ny fifidianana tao Tsimbazaza iny dia raharahan’ny antoko telo izay milaza azy ho matanjaka eto Madagasikara noho ny fananany depiote ao amin’ny parlemanta, dia ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara), izay antokon’ingahy Hery Rajaonarimampianina, filoham-pirenena amperin’asa, ny Mapar antokon’ingahy Andry Nirina Rajoelina ary ny TIM izay antokon’ingahy Marc Ravalomanana. Ny ankoatr’izy telo ireo dia toa ny tsy misy tanteraka fa ambinambiny fotsiny ihany.
Noho izany dia ny fiarovana anjambany ny filohan’ny antoko ireo no mibaiko ny fandaniana ity lalàm-pifidianana ity hatramin’izao, fa tsy misy akory izay fijerena ny tombotsoam-pirenena.
Raha fintinina ny olana lehibe mipetraka ho azy telolahy sy ny antoko tarihiny avy dia miompana amin’ireto zavatra telo ireto izay voalaza ao anatin’io volavolan-dalàna io. Ny voalohany amin’izany dia ny mahakasika ilay “bulletin n°2” izay takiana amin’ny olona hilatsaka hofidiana rehetra, ka raha vao misy pentina ity biletà laharana faharoa ity dia tsy mahazo milatsaka hofidina. Ny faharoa dia mahakasika ny olona tsy nahaloa hetra hatramin’izay ka ananan’ny fanjakana sy ny vahoaka vola. Ny fahatelo dia momba ny fampiasana vola be sy fitaovana maro isan-karazany hozaraina amin’ny mpifidy toa ny “tee Shirt” sy ny elo ary fizarana fitaovana hafa koa. Raha anontaniana ny Malagasy manontolo dia inoana fa tsy hisy handa ireo volavolan-dalàna ireo.
Ireo zavatra telo ireo nefa no olana ho an’ingahy Marc Ravalomanana sy ny TIM satria sady manana raharaha amin’ny fitsarana sy ananan’ny fanjakana vola noho ny hetrany ary mieritreritra hividy olona indray toa ny nataony tamin’ny taona 2001 izay nahalany azy ity filoha teo aloha naongan’ny olona ity.
Ny Mapar indray dia miaro mafy an’ingahy Andry Nirina Rajoelina satria hampiasa ny volabe azony tamin’ny fanondranana antsokosoko ny andramena sy vatosoa ary volamena tamin’ny andron’ny tetezamita iny izy amin’io fifidianana io. Ny Mapar izay mirehareha fatratra fa manam-bola noho ny raharaha maizina teto Madagasikara tamin’izany.
Ny Hvm indray manantena mafy ny fahefam-panjakana ka manararaotra izany hampiasana amin’ny handresena amin’ny fifidianana izao ka manao izay hamelezana iretsy heveriny fa manalokaloka ny fandreseny amin’io fifidianana io.
Raha jerena amin’ny maso mahitsy izany rehetra izany dia lasa raharahan’olon-tokana sy fiarovana ny tombotsoan’izy telo lahy ireo no nandrafetana ity lalàm-pifidianana ity, ka mahatonga izay olana eto amin’ny firenena Malagasy izao indray. Na dia namaly ampahany ny hetahetam-bahoaka ity tolo-dalàna ity dia tsy afaka mijery izany intsony ireto mpifanandrina ireto fa efa samy miaro ny antokony sy ny tombotsoany tsirairay avy.
Vokatr’izany dia tsy ho lany ao amin’ny Antenimierampirenena velively ity tolo-dalàna ity ka tsy maintsy handalo any amin’ny Antenimierandoholona etsy Anosy, ary mbola hiverina indray any amin’ny depiote. Hiafara amin’ny fandraisan’ny filohan’ny repoblika didy hitsivolana izany.
Ny sarisary faharoa izay mety hitranga koa dia ny fisian’ny korontana indray satria samy tsy hisy hanaiky mora foana ity raharaha ity handeha amin’izao ireo antoko telo ireo.
Noho izany dia mampanahy ny raharaha pôlitika ankehitriny, ka maro no matahotra ny hiverenan’ny krizy pôlitika indray. Raha tonga amin’izany nefa ny firenena dia tompon’antoka amin’izany ny antoko telo ireo dia ny HVM sy ny Mapar, ary ny TIM.
Mihevitra izy telo lahy ireo fa tompon’i Madagasikara ka mieritreritra ny vahoaka ho tsinontsinona mihitsy. Ny fiheverana toa izao no nahatonga ny filoham-pirenena nifandimby teo naongan’ny vahoaka.
Morondava: Sakanan’ny ben’ny tanàna tsy hanao tatitra ny depiote
Tsy eto Antananarivo ihany no mafana ny raharaha politika amin’izao fotoana izao. Saika ahitana adilahy avokoa ny faritra maro manerana ny nosy. Ny ao Morondava ity no isan’ny misarika ny saina amin’izao fotoana izao. Mazava ny raharaha fa resaka HVM (Hery Vaovao hoan’i Madagasikara) sy ny Mapar (Miaraka amin’ny Rajoelina) ny raharaha.
Nangataka tamin’ny ben’ny tanànan’i Morondava ny depiote avy any amin’ity toerana ity volana ity hanao tatitra mahakasika ny fivoriana nataon’ny solombavambahoaka momban’ny lalàm-pifidianana ity. Fanakanana avy hatrany nefa no azony amin’izany. Depiote hanao tatitra amin’ny vahoaka izay lazain’ny lalàna hanao izany no sakanan’ity ben’ny tanàna ity. Raha ny loharanom-baovao azo mahakasika ity raharaha ity dia mahazo baiko ny tompon’andraikitra aram-panjakana rehetra any amin’ny faritra ankehitriny fa tsy mahazo manao famoriam-bahoaka intsony ankoatrin’ny antoko HVM.
Ny fitambaran’ny fandrarana sy ny sakasakana toa izao no niteraka korontana teto Madagasikara hatramin’izay. Tadiavina avokoa izay fomba rehetra tsy hahazoan’ny olom-boafidy sy ny fikambanana tsy momba ny fanjakana hamory vahoaka. Toa ny fanakanana ny olona maheno hevitra eto Anatananarivo izy ity, satria ny zandarimaria any Morondava no anaovan’ny ben’ny tanàna hery famoretana amin’ny fanakanana ny fanaovana tatitra hataon’ny depiote ity.